Soo-saareyaasha Rakaabka / Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda Rakaabka Shiinaha / Warshad MDVR
MRB miiska rakaabka otomaatigga ah ee baska HPC168
HPC168 waa nidaam tirinta rakaabka otomaatig ah oo loogu talagalay Bus. Qaar badan oo ka mid ah tikidhadayada rakaabka waa alaab sharciyeysan. Si looga fogaado xatooyada, ma aanan saarin waxyaabo aad u badan bogga. Waxaad la xiriiri kartaa shaqaalaheena iibka si ay kuugu soo diraan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan miiska rakaabka. Kaaliyaha rakaabka ee HPC168 wuxuu leeyahay dhisme Huawei-ga u heellan oo fiidiyoow ah oo wax-qabad sare leh, wuxuuna adeegsadaa qaab-dhismeedka ugu weyn ee laba-kamarad ah ee algorithm si uu si firfircoon ugu ogaado iskutallaabta, wuxuu ...
Qaar badan oo ka mid ah nidaamkayaga tirinta rakaabka waa alaabo shati leh. Si looga fogaado xatooyada, ma aanan saarin waxyaabo aad u badan bogga. Waxaad la xiriiri kartaa shaqaalaheena iibka si ay kuugu soo diraan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan nidaamkayaga tirinta rakaabka. HPC088 nidaamka tirinta rakaabka waa saxsanaan sare (98% +) badeecada tirinta rakaabka baska loogu talagalay tirinta otomaatiga ah ee rakaabka iyadoo lagu saleynayo tikniyoolajiyadda aragtida muuqaalka indhaha iyo tiknoolajiyada falanqaynta muuqaalka leh. Kaamirada binocular ee rakaabka co ...
MRB Mobile DVR gaariga
Telefoonkeena gacanta dvr wuxuu leeyahay afar shati. Si looga fogaado in ay u soo guuriyaan soo saarayaasha kale, kaliya waxaan qayb yar oo ka mid ah macluumaadka ku dhejineynaa websaydhka. Fadlan la xiriir shaqaalaheena iibka waxaanan kuu soo diri doonaa macluumaad faahfaahsan. Mobile dvr waa nooc ka mid ah qalabka kormeerka duubista fiidiyowga dijitaalka ah. Mobile dvr waxaa badanaa loo adeegsadaa basaska dhaadheer, basaska magaalooyinka, tareenada, tareenka dhulka hoostiisa mara iyo gaadiidka kale ee dadweynaha, amniga guud, ilaalinta dabka, maareynta sharci fulinta maamulka magaalooyinka ...
Kaamirada Gawaarida MRB ee loogu talagalay DVR mobilada
Gaarigeenna cctv wuxuu leeyahay afar shati. Si looga fogaado in ay u soo guuriyaan soo saarayaasha kale, kaliya waxaan qayb yar oo ka mid ah macluumaadka ku dhejineynaa websaydhka. Fadlan la xiriir shaqaalaheena iibka waxaanan kuu soo diri doonaa macluumaad faahfaahsan. Waxyaabaha kamaradaha cctv ee baabuurta: (MCD001 179 °) AHD dareeraha muuqaalka muuqaalka sare, tayada muuqaalka sare, xallinta waxtarka leh ee 1920 * 1080. Xagasha dhabta ah ee ballaadhan: Diagonal 201, darajooyinka 182 darajo, toosan 126 darajo. Gawaarida cctv kaamerada Fikradaha ...